Wararka Maanta: Talaado, Nov 3 , 2020-Waare oo sheegay in uu iska casilay xilkii madaxweynaha Hirshabeelle
Madaxweyne Waare oo qoraalkiisa is casilaada kaga sheekeeyay taariikhdii laga soo maray dhismaha Hirshabeelle ayaa sheegay in marnaba Hirshabeelle dhismaheeda aan loo marin dariiqii saxda ahaa ee dhismaha maamul loo maro, isaga oo sheegay in Hirshabeelle labada marba lagu soo aadiyay dhismaheeda xili lagu guda-jiray ololaha Doorasho ee heer Federaal.
Wuxuu sheegay in labada Baarlamaan ee Hirshabeelle lagu soo beegay xili dalka uu ku jiro olole doorasho, waxaana uu ku taliyay in dib loo dhigo dhismaha Hirshabeellada cusub ilaa uu ka dhamaanayo waqtiga dowladda hadda jirta, si markaa iyadoo la Miir qabo loo guda-galo dhismaha Labaad ee Hirshabeelle.
''Baarlamaankii la soo dhisay sanadkii 2016ka wuxuu uu ku soo aaday xili lagu guda-jiray olole doorasho, umana ekeyn Baarlamaanka ka tarjumayay una adeegayay danaha deegaannada uu matalo, sidaa oo kale dhismaha Baarlamaanka Labaad ee sanadkan 2020ka ayaa imanaya xili uu socdo loolan adag oo dhinaca doorashada ah'' ayuu qoraalkiisa ku sheegay madaxweyne Waare.
Is casilaadan Madaxweyne Waare ayaa imaneysa iyadoo muran iyo khilaaf xooggan uu ka taaggan yahay awood-qeysiga kuraasta sare ee Hirshabeelle.
Hoos ka akhriso Qoraalka is casilaada madaxweyne Waare.